Ilaah sidoo kale wuu jecel yahay cawaannimada, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Markasta oo uu jiro dood ku saabsan su'aasha iimaanka, waxaan la yaabanahay sababta ay ugu egtahay inay rumaystayaashu dareemayaan inay liitaan. Mu'miniintu waxay sida muuqata u qaadanayaan in caabudayaashu ay si uun ku heleen caddaynta inay rumaystayaashu ku guuleystaan ​​diidmada mooyee. Xaqiiqdu waxay tahay, dhinaca kale, uma suurtoobi waydo kuwa caasiyiinta ah inay caddeeyaan inuusan Ilaah jirin. Sababtoo ah rumaystayaashu ma qancin karaan kuwa caabuda jiritaanka Eebbe kama dhigna in kuwa caasiyiinta ahi ay heleen caddayn. Atheist Bruce Anderson wuxuu iftiimiyay maqaalkiisa "Qirashada Atheist": "Waxaa wanaagsan in la xasuusto in dadka ugu caqliga badan ee weligood noolaa ay rumeysan yihiin Ilaah." Dad badan oo caabuda diin laawayaasha ah ma doonayaan inay rumaystaan ​​jiritaanka Ilaah. Waxay doorbidaan inay u arkaan sayniska inay tahay dariiqa kaliya ee runta. Laakiin saynisku runtii waa sida kaliya ee runta loo sheego?
Buuggiisa: "Khiyaanada Sheydaanka: Atheism iyo Pretension Science-ka" David Berlinski, cilmi-nafsiga, ayaa ku nuuxnuuxsaday in aragtiyaha jira ee ku saabsan fikirka aadanaha: baanka weyn, asalka nolosha iyo asalka arrintu ay dhammaantood u furan yihiin dood. Tusaale ahaan, wuxuu qoraa:
«Sheegashada fikirka aadanaha uu ka dhashey isbeddelka ma ahan xaqiiq aan laga gudbi karin. Hada waad soo gabagabeysey. »
Sida naqdinta naqshadaha caqliga iyo Darwinism labadaba, Berlinski wuxuu farta ku fiiqay inay weli jiraan ifafaalo badan oo sayniska uusan sharxi karin. Waxaa jira horumar weyn oo ku saabsan fahamka dabeecadda. Laakiin ma jiraan wax - haddii si cad loo fahmo oo si daacad ah loo sheego - waxay ka dhigeysaa lagama maarmaan in la iloobo abuuraha.
Waxaan aqaanaa dhowr saynisyahano shaqsiyeed. Qaarkooda hogaan ayey ku yihiin. Dhibaato kuma qabno inay la heshiiyaan waxa ka soo baxa baaristooda iyo aaminaadooda Ilaah. Markii aad wax badan ka ogaato abuurista jir ahaaneed, waxay sii kordhineysaa aaminaaddaada Ee abuuraha. Waxay sidoo kale farta ku fiiqeen in tijaabooyin aan la abuurin karin oo caddayn kara ama beenin kara jiritaanka Ilaah dhammaan Malaakii. Waad aragtaa, Ilaahay waa abuuraha ee ma aha qayb abuurka. Mid ka mid ah "ma ogaan karo" Ilaah isagoo raadinaya isaga marxaladaha abuuritaanka qoto dheer. Ilaahay keliya ayaa dadka iskugu muujiya isaga iyo wiilkiisa, Ciise Masiix.
Weligaa ma heli doontid Ilaah natiijada natiijada tijaabada ah. Adigu waad garan kartaa oo keliya Ilaah maxaa yeelay isagu wuu ku jecel yahay, maxaa yeelay isagu wuxuu doonayaa inuu kuu aqoonsado. Taasi waa sababta uu u soo diray wiilkiisa si uu innaga mid noqdo. Markaad ogaatid cilmiga Eebbe, taasi waa, ka dib markii aad qalbigaaga iyo maskaxdaada u furatid, iyo markii aad soo martay jacaylkaaga shaqsiyeed, shaki kuma qabtid inuu Ilaah jiro.
Tani waa sababta aan ugu sheegi karo cawaan-laaweyaasha in lagu caddeyn karo isaga in uusan jirin Ilaah oo aan ila jirin in uu jiro. Mar alla markii aad aqoonsatid, waad rumaysan doontaa. Waa maxay qeexitaanka saxda ah ee kuwa caabudaa? Dadka ha rumeysanina (wali) ha rumeysan Eebe.